Fashion နဲ့ပတ်သက်ရင် Follow လုပ်ထားသင့်သော ကိုရီးယား influencer (၅) ယောက် – FemaleWear.net
Korea style ချစ်သူတွေအတွက် ကိုရီးယားမလေးတွေလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အလှအပကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မဖြစ်မနေ follow လုပ်ထားသင့်တဲ့ instagram influencer တွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ သူတို့ကို follow လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုရီးယားမလေးတွေရဲ့ အလှအပနဲ့ စတိုင်လေးတွေကို inspired ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်။
1. BYUN JUNG HA
ဆူးရှတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ တင့်တယ်တဲ့အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူမကတော့ BYUN JUNG HA ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ instagram follower 552K ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ Korean industry တစ်ခုမှာ နာမည်ကျော်ကြားနေတဲ့ influencer တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
A post shared by 변정하 (@1993kg) on May 8, 2018 at 8:23pm PDT
2. 마성의 바나나
ချစ်စရာမျက်နှာထားနဲ့ အရုပ်မလေးအသွင်လှပနေတဲ့ သူမကတော့ instagram follower 260K ရှိနေပါတယ်။ သူမကတော့ ကိုရီးယား clothing store တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Baanana ရဲ့ model တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
여름의 좋은 점은 음…..안 춥다…. 그리고 음…. 음… 으음…..? . . #빠나나 #피팅모델 #네이버에빠나나
A post shared by 마성의 바나나 (@bba_na_na) on May 9, 2018 at 7:20pm PDT
သူမကတော့ ကိုရီးယားလူမျိုးလို့ မထင်ရလောက်အောင် ကွဲပြားတဲ့ အလှကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ပါ။ သူမရဲ့အဓိက inspired လုပ်တဲ့အချက်ကတော့ သူမပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ထိန်းသိမ်းပုံ tutorial တွေကို Youtube မှာတင်လေ့ရှိကြောင့် လူသိများနေတဲ့ influencer တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။
Gooooood morning??‍♀️? . #goldcoast#gym
A post shared by 콩필라테스 Pilates (@congpilates) on Apr 27, 2018 at 2:16pm PDT
4. DJ SODA
SODA ကိုတော့ မသိတဲ့သူမရှိလောက်ပါဘူးနော်။ ကိုရီးယားရဲ့ နာမည်ကြီး အမျိုးသမီး Dj တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ instagram follower2Million ရှိနေသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
#android18 ??? #dragonballz #DragonBall #드래곤볼 #dbg ? @jinveun
A post shared by Dj Soda Official ?? (@deejaysoda) on Apr 24, 2018 at 8:14am PDT
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးချင်တဲ့ သူမကတော့ အနောက်တိုင်းဆန်ဆန် style တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ LEE HO-JUNG ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တချိန် Korean industry ရဲ့ အနာဂတ်ကြယ်ပွင့် သူတစ်ဦးဖြစ်လာအုံးမှာ သေချာနေတဲ့ သူမကတော့ လက်ရှိမှာ instagram follower 468K ရှိနေပါတယ်။
Get your SUNGLASSES ?
A post shared by HOLLY 이호정 (@holly608) on Apr 29, 2018 at 10:47pm PDT
Tags: Celebrity, The Best Fashion Instagram